खरबुजा खादै हुनुहुन्छ ? सावधान ! विष हुन सक्छ « Himal Post | Online News Revolution
खरबुजा खादै हुनुहुन्छ ? सावधान ! विष हुन सक्छ
प्रकाशित मिति : २०७६, २७ बैशाख १३:२१
खरबुजा पकाउनका लागि अक्सीटोसिन इन्जेक्सन प्रयोग गरिन्छ । अक्सिटोसिनले पकाइएको फल सेवन गर्दा हर्मोनसँग सम्बन्धित रोग लाग्न सक्छ । यसको असर धेरैजसो महिलामा बढी हुन्छ । खरबुजामा सिन्थेटिक रंग पनि प्रयोग गरिन्छ । सैकरिनले खरबुजालाई मिठो बनाउँछ । तर, यो शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ ।
विष छ वा छैन भनेर थाहा पाउन केही परिक्षण गरे पुग्छ । खरबुजा खरिद गर्नुअघि यसलाई काट्नुहोस् । यदि बोक्राको तल्लो भाग हरियो र हल्का सेतो छ भने त्यो प्राकृतिक तरिकाले पाकेको हुन्छ । यदि खरबुजा काटेर हेर्दा त्यसको बोक्राको मुनी धेरै रातो देखियो भने त्यसमा सिन्थेटिक रंग मिसाइएको हुनसक्छ ।
खरिद गर्नुअघि यो पनि हेरौं कि, खरबुजाको आकार सबैतिर एकैनास होस् । कतै काटिएको वा प्वाल परेको छ भने त्यस्तो खरिद गर्नु हुन्न । जाँच गर्दा थाहा भएन भने पनि खरबुजा खानुअघि १० मिनेट वा १५ मिनेटसम्म पानीमा डुबाएर राखौं । यसले गर्दा खरबुजाको माथिल्लो सतहमा लागेको रसायन पखालिन्छ ।